म्याराथनमा पार्की प्रथम, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
चितवन । लायन्स क्लब अफ बागिश्वरीले आज यहाँ आयोजना गरेको २१ किलोमिटर मिनी म्याराथुन प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरीका गोपीचन्द्र पार्की पहिलो भएका छन ।
उनले प्रमाणपत्रसहित नगद रु ४० हजार प्राप्त गरेका छन् । उनले २१ किमीको दूरी एक घण्टा ११ मिनेट ४१ सेकेन्डमा पार गरेका हुन् । नेपाल आर्मीका कृष्ण बस्नेत दोस्रो भए । उनले रु २५ हजार नगद र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । उनले एक घण्टा ११ मिनेट ५२ सेकेन्डमा दूरी पार गरेका हुन् ।
यसैगरी आर्मीका गजेन्द्र शाह तेस्रो, आर्मीकै होमलाल श्रेष्ठ चौथो, आर्मीकै कल्याण बानियाँ पाँचौ भए । उनीहरुले क्रमशः रु १५ हजार, रु सात हजार र रु पाँच हजार नगद प्राप्त गरेका छन् । क्लबका अध्यक्ष जीवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विजयीलाई भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण गरेकि थिइन।